Çevresel koruma / Fiarovana ny tontolo iainana – Diyaloglar | OpenTran
Çevresel koruma / Fiarovana ny tontolo iainana – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Çevresel koruma / Fiarovana ny tontolo iainana – Diyaloglar
Sibylla: Inona no tena vakianao, Glenn?
Glenn: bokikely momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiasana fanodinana. Tokony hamaky azy io koa ianao. Misy fampahalalana mahasoa be dia be.
Sibylla: hitako. Olana mahaliana izany. Efa zatra fanodinana tavoahangy plastika aho, fa inona koa no azontsika anaovana azy?
Glenn: Saika ny zava-drehetra. Ny entana rehetra dia azo averina simbaina amin'ny famoronana vokatra vaovao. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana taloha sy tsy ilaina dia apetraka amin'ny fampiasana vaovao fa tsy manipy fotsiny.
Sibylla: Tsy fantatro izany. Ho ahy, ny fanodinana dia midika fotsiny fa ny fihenan'ny haben'ny fanariam-pako.
Glenn: Eny, io no iray amin'ireo tombontsoa miavaka indrindra azo avy amin'ny fanodinana. Na izany aza dia zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny natiora sy ny bibidia.
Sibylla: Inona no tianao holazaina amin'izany?
Glenn: Ohatra, ny fanodinana taratasy fotsiny dia mamonjy hazo an-tapitrisany. Rehefa mamonjy ny hazo tsy hikapa isika, dia mamonjy bibidia marobe, izay ala na ala mikitroka.
Sibylla: Azoko izao. Amin'izay lafiny izay dia manohana tanteraka ny fanodinana aho. Tsy tiako ny biby maro lasa lany tamingana. Tamin'ny volana lasa teo dia nandray anjara tamin'ny fanentanana hanohitra fitsapana biby aza aho.
Glenn: Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha ny olan'ny natiora. Tsy zava-dehibe ho azy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana.
Sibylla: Afaka nanomana tetik'asa momba an'io lohahevitra io izahay ary manolotra izany amin'ny mponina eo an-toerana.
Glenn: Mihevitra ianao fa hanana mpanohana izahay?
Sibylla: Mazava ho azy. Azoko antoka fa maro ny olona liana amin'ny tontolo madio sy ny manodidina mahasalama.
Glenn: afaka miresaka lohahevitra hafa mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa izahay.
Sibylla: Iza, ohatra?
Glenn: Ankoatr'ity bokikely ity dia nahita lahatsoratra tao amin'ny magazine momba ny karazana fandotoana isan-karazany, ny fahavoazana ary ny fomba fisorohana.
Sibylla: Toa lohahevitra tsara. Afaka nanao lahateny momba ny fanodinana entana aho, raha afaka manomana kabary momba ny rivotra, rano ary karazana fahalotoana hafa kosa ianao.
Glenn: tsy maninona aho. Afaka miresaka mandritra ny ora maro momba an'io lohahevitra io aho. Raha ny fandotoana no resahina dia ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny fanandramana ataon'ny orinasa no tena manimba. Ny orinasa maoderina dia manipy fako be dia be ka maty ny biby an-dranomasina maro, marary ny olona, ​​mijaly ny bibidia.
Sibylla: Inona avy ireo karazana fandotoana tontolo iainana hafa fantatrao, afa-tsy ny fahalotoan'ny rivotra sy ny rano?
Glenn: fantatro fa misy tabataba sy fandotoana maivana. Misy ihany koa ny karazana fandotoana hita maso sy mafana.
Sibylla: Tsy mbola naheno momba azy ireo. Manontany tena aho hoe ahoana no nitrangan'ireny zavatra ireny?
Glenn: Alao an-tsaina ange ny tabataba tsy an-kijanona avy amin'ny fiaramanidina, fiara moto, fizotry ny fananganana sns ... Samy miteraka fihenjanana amin'ny olona sy ny biby izy rehetra. Jiro mamirapiratra, jiro fanampiny manodidina ny trano misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona.
Sibylla: Ahoana ny amin'ny fandotoana ny maso sy ny hafanana?
Glenn: Miresaka momba ny fahalotoan'ny fahitana isika, rehefa manakana ny fomba fijery voajanahary ny tranobe manara-penitra. Ataon'izy ireo ho maizina ny tanàn-dehibe nefa tsy misy tara-pahazavana eny an-dalambe. Ny takelaka takelaka be loatra dia heverina ihany koa fa hiteraka fandotoana amin'ny fahitana. Ny fandotoana mafana dia mety vokatry ny mpanamboatra eo akaiky eo, rehefa manondrika rano mafana sy maloto ao anaty rano voajanahary izy ireo.
Sibylla: Lohahevitra somary sarotra izany. Ankasitrahako raha niresaka momba izany ianao. Betsaka ny olana izay mbola tsy reko na nihaona talohan'izay. Azoko antoka fa olona maro ao an-tanàna no mitovy amiko - tsy mahay mamaky teny sy manoratra raha resaka olana ara-tontolo iainana. Ka te hahalala zava-baovao izy ireo.